Fitsapana Apple Stores dia mangalatra Apple Pencils | Vaovao IPhone
Ny tsy fahampian'ny fahitan'i Apple mialoha ny momba ny fananana stock of the new iPad Pro accessories, dia naneho indray ny fihazakazahan'i Apple hitondra ity fitaovana vaovao ity haingana araka izay tratra alohan'ny fahatongavan'ny vanim-potoanan'ny Noely, izay antony mahatonga ny fividianana mpampiasa betsaka ny fitaovana Apple.
Fa koa, amin'ny raharahan'ny Smart Keyboard dia vao mainka mihosin-dra ity tranga ity, satria amin'ny teny anglisy ihany no misy azy. Soa ihany, ao amin'ny Apple Stores dia manolotra ny solony Logitech ihany koa izy ireo fa raha hita dia Espaniôla ankoatry ny somary mora vidy kokoa.
Ny tsy fisian'ny singa Apple Pencil ary ny filàna ilaina an'ity karazana fitaovana ity dia niteraka ny famerenana ireo fitaovana ireo tamin'ny eBay, izay afaka mahita ny Apple Pencil amina 400 dolara eo isika. Ireo Apple Pencil ireo dia avy amin'ny mpampiasa izay nividy azy fa na inona na inona antony mbola azon'izy ireo atao raha tsy misy azy. Ka araraotin'izy ireo ny famarotana azy indray amin'ny vidiny efatra heny.
Azontsika atao koa anefa izany mahita Apple Pencil nangalarina tao amin'ny Apple Stores. Amin'ny magazay Apple maro any Etazonia, nanjavona avokoa ireo sampana azo zahana rehetra mba hahafahan'ny mpividy ho avy manandrana ny asany amin'ny iPad Pro alohan'ny hividianana azy io, hahitana raha tena hanararaotra izy ireo na tsia.
Nahazo pensilihazo 20 ny My Store Apple omaly. Navelan'izy ireo hividy lehilahy 20 izy rehetra.
Mandritra izany fotoana izany dia tsy misy pickup ao amin'ny magazay ary miverina amin'ny herinandro 4-5.
- Marco Arment (@marcoarment) Novambra 18, 2015
Ity tsy fahampian'ny singa Apple Pencil ity dia mamadika ity fitaovana ity ho orinasa. Raha ny filazan'i Marco Arment, mpamorona ny Overcast, ireo olona mankany amin'ny Apple Store Mahazo ny singa rehetra azo alefa indray amin'ny eBay ianao. Toy ny mahazatra dia tsy manonona momba an'io raharaha io i Apple ary ny hany fampahalalana azontsika raisina momba ny fisian'ity fitaovana ity, azontsika atao izany avy amin'ny Apple Stores, izay anoloran'izy ireo fe-potoana fiandrasana mandritra ny efatra ka hatramin'ny dimy herinandro hahafahana mahazo iray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Fitsapana Apple Stores dia mangalatra Apple Pencils
Gelroc19 dia hoy izy:
Raha ny mahazatra dia hitako tao amin'ny fivarotana paoma izy ireo ary malalaka izy ireo, eo akaikin'ny ipad pro, ary nieritreritra aho fa, rehefa feno ny fivarotana paoma dia hangalarina tokoa izy ireo.
Valiny tamin'i Gelroc19
Manana Apple Watch ve ianao? Tsy mampiasa afa-tsy charger ankatoavin'ny Apple ianao!